सिक्न र सिकाउन तयार रहे सिकाइ प्रभावित हुँदैन - Nepal's No.1 Educational portal
सिक्न र सिकाउन तयार रहे सिकाइ प्रभावित हुँदैन
by इडीयु पत्रिका २ श्रावण २०७८, शनिबार १८:४९ 1670Comment
अर्घाखाँची /९ असार- कोभिड-१९ का कारण देशमा बन्दाबन्दी चलिरहेको छ । व्यापार व्यवसायसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि यसको मारमा परेको छ । विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् जसका कारण शिक्षण सिकाइ प्रभावित भएको छ ।सरकारले असार १ गतेबाट शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्ने र पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नुपर्र्ने भएको छ । तर विद्यालय खुल्न सकेनन् भने सिकाइको वैकल्पिक उपाय के ? भन्ने बारेमा धेरै अन्योल रहेका छन् ।
कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर सामुदायिक विद्यालयले भने कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकार र स्थानीय तहको निर्देशन कुरिरहेका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा प्रविधिको ज्ञान र पहुँच नहुँदा सिकाइ प्रभावित भएको पाइन्छ । साथै विद्यार्थीमा पनि प्रविधिको पहुँच पुग्न नसक्दा चाहेर पनि विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर विद्यार्थीलाई सिकाउने कतिपय हामी शिक्षक प्रविधिको बारेमा ज्ञान लिन सकेका छैनौँ । आवश्यक भए त सिक्न सक्ने हामी आफैँ प्रविधिसँग जोडिएर सिकाउँदा झन्झट हुने कारण त्यसतर्फ ध्यानैै नदिएका पनि हौँ कि ? अनलाइन कक्षा भन्नेबित्तिकै कम्प्युटरबाटै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । विद्यालयले विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन गरेर मोबाइलको पहुँच भएका विद्यार्थी हुने विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने भने होइन ।
हामी शिक्षकलाई आफ्नो आवश्यकताको लागि मोबाइल चलाउन सिक्यौँ । त्यसमा फेसबुक चलाउन सिक्यौँ । यो हाम्रो सिक्ने तत्परता थियो र इच्छाशक्ति थियो । फेसबुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न सक्ने हामी त्यही मोबाइल र फेसबुकबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न किन नसक्ने ? राजनीतिक दलका जुम मिटिंगमा सहभागी हुन सक्ने हामी जुम कक्षाबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न किन नसक्ने ? चाह्यौ भने हामीले अवश्य सक्छौँ ।
फेसबुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न सक्ने हामी त्यही मोबाइल र फेसबुकबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न किन नसक्ने ? राजनीतिक दलका जुम मिटिंगमा सहभागी हुन सक्ने हामी जुम कक्षाबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न किन नसक्ने ? चाह्यौ भने हामीले अवश्य सक्छौँ ।
यदि नसक्ने भए सिक्नको लागि तत्पर भयौँ भने विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकहरुबाट तालिम लिन सकिन्छ वा अन्य जानकार जो कोहीबाट तालिम लिई सिक्न सकिन्छ । निजी विद्यालयका शिक्षकले शिक्षण गरेपछि मात्र तलब सुविधा पाउने भएकाले उनीहरु सिकाइ सहजीकरणका लागि आफैले सिकेर भए पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब सुविधा नपढाए पनि आउँछ भन्ने मानसिकताका कारण सिकाइ सहजीकरण हुन नसकेको पो हो कि ?
हुन त सरकारले शिक्षकलाई खोपको प्राथमिकता दिएन । बजेटमा पनि निजामतिसरह सुविधा दिएन । अब संघीय सरकारले निराश बनाएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले खुसी बनाउनको लागि आवश्यक नीति लिनुपर्छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ भने स्याङजाको वालिङ नगरपालिका वडा नं १३ ले विद्यार्थीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । यो छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्य स्थानीय तहले पनि कमसेकम शिक्षक र विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिन सके प्रविधिको युगमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव छैन ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ भने स्याङजाको वालिङ नगरपालिका वडा नं १३ ले विद्यार्थीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । यो छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
इन्टरनेट सुविधा हुने हो भने हामी शिक्षकले अनलाइनबाटै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न सक्छौँ । गुगल डक्सबाट हामीले फर्म बनाएर भर्ना गर्न सक्छौँ, अनलाइन परीक्षा लिन सक्छौँ र हाजीरी रेकर्ड राख्न सक्छौँ । विभिन्न शैक्षिक पोर्टलबाट शिक्षा लिन दिन सक्छौँ । सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्मित एपबाट हामी सिक्न र सिकाउन सक्छौँ । विद्यार्थीले पनि सोहीअनुसार सिक्न सक्छन् जसबाट सिकाइ प्रभावित हुँदैन । इन्टरनेटमा भएका सिकाइसँग सम्बन्धित सामग्री विद्यार्थीलाई पठाएर सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले फेसबुक मेसेन्जरमा कक्षा अनुसारको गु्रप बनाएर विद्यार्थी वा सम्बन्धित विद्यार्थीको अभिभावकलाई जोडेर जुम कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ । विद्यार्थीका प्रश्नको समाधान गर्न सक्छौँ । फोटो खिचेर भए पनि समाधान गरेर पठाउन सक्छौँ । अडियो भिडियोबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छौँ । यसका लागि अभिभावक पनि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफ्ना छोराछोरीले इन्टरनेटबाट के सिक्दैछन् र के गर्दै छन् भन्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्र्नैपर्ने हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि गतवर्षकै सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाकै आधारमा सिकाइलाई निरन्तरता दिन निर्र्देशन दिइसकेको छ । अब कि त अनलाइन कक्षा, कि त सम्पर्क कक्षा, टोलटोलमा शिक्षण, र स्वयंसेवकबाट सिकाइ सहजीकरण वा त टीभी रेडियोबाट भर्चुअल कक्षा, अभिभावक शिक्षा र स्वाअध्ययन जसमा सम्भव छ र पहुँच पुग्छ त्यसैबाट सिक्ने सिकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि विद्यार्थीमा पनि तत्परता र इच्छाशक्ति हुनैपर्छ ।
विद्यार्थीले पनि मोबाइल कम्प्युटरमा पब्जी खेल्न फ्रिफायर खेल्न, फेसबुक चलाउन र टिकटक बनाउन डाटा किनेर भए पनि सम्भव हुने तर अनलाइन कक्षा लिन नसक्ने देखिएको पाइन्छ । यसको मूल कारण विद्यार्थीमा सिक्ने रुचि नहुनु र तत्परता नहुनु हो । यसको लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको समन्वयमा सिकाइ सहजीरकणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । पब्जी खेल्न फ्रिफायर खेल्न, फेसबुक चलाउन र टिकटक बनाउन डाटा लिन सक्ने विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिन नसक्ने भने होइनन् । उनीहरुलाई रमाइलो हुने गरी विभिन्न शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर अनलाइन कक्षामा जोडिन प्रेरित गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले पनि यस्तो बेलामा आफूले कसरी सिक्ने भनेर सम्बन्धित विषयका शिक्षकलाई सोधेर उनीहरुको निर्देशनअनुसारको कार्य गर्न तयार हुनुपर्छ । मोबाइललाई पनि शैक्षिक सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरेर सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ । टीभी, रेडियोबाट सञ्चालित भर्चुअल कक्षामा समय मिलाएर सहभागी भई सिक्नुपर्छ । आफूले नजानेको कुरा सम्बन्धित शिक्षकलाई मेसेन्जर वा सिधै सम्पर्क गरेर सोधेर पनि सिक्न सकिन्छ ।
पब्जी खेल्न फ्रिफायर खेल्न, फेसबुक चलाउन र टिकटक बनाउन डाटा लिन सक्ने विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिन नसक्ने भने होइनन् । उनीहरुलाई रमाइलो हुने गरी विभिन्न शिक्षण विधिको प्रयोग गरेर अनलाइन कक्षामा जोडिन प्रेरित गर्नुपर्छ ।
सरकारको निर्र्देशन र स्थानीय सरकारको निर्देशन कुर्नुभन्दा विद्यालय तथा शिक्षकले सिकाइ सहजीकरणमा इच्छाशक्ति देखाउने हो भने आफ्नो सेवा क्षेत्रका विद्यार्थीको अवस्था अध्ययन गरेर कुन विधिबाट शिक्षण गर्न सकिन्छ त्यसको जानकारीसहितको प्रस्ताव स्थानीय तहमा लगेर उचित भए स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गराउन पहल गरी निर्देशन दिनुपर्छ ।
जेहोस् शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले समन्वय गरेर प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सरसल्लाहमा विद्यालय सेवा क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर कसरी सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न विद्यालयले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । यदि विद्यालय खुल्न नसके सरकारले दिएको निर्देशन सबैतिर उपयुक्त नहुन सक्ला त्यसैले निर्देशनको टीकाटिप्पणी गर्नेभन्दा पनि सरोकारवाला निकायले कस्तो विधि अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यसैलाई कार्यान्यवन गराइ सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
अभिभावकले पनि शिक्षकले बसीबसी तलब खाए भनेर आरोप लगाउनुभन्दा कसरी आफ्ना बालबालिकाले सिकाइ सहजीकरण गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा उपयुक्त लागेका सुझाव दिएर शिक्षकलाई पनि सिकाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको तत्परता र सुमधुर सम्बन्ध भए सिकाइ सहजीकरण गर्न उपयुक्त विधि अपनाउन सकिन्छ ।
(लेखक पत्रकारिता र बुटवल तामनगरको नवरत्न माविमा अङ्ग्रेजी माध्यमका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)